Sunday, 04.05.2020, 12:04am (GMT+5.5) Home Contact
Wednesday, 01.18.2017, 12:55pm
नेपाल इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा छ । देशभित्र अनेक किसिमका वितण्डाहरूको सिर्जना भैरहेको छ भने बाहिरी शक्तिले त्यसलाई मलजल गरेर मजबुत नेपाल र एकताबद्ध नेपालीलाई कमजोर पार्दै आफ्नो औंलामा नाच्ने बनाउन खोजिरहेको छ । सोझा नेपाली जनतालाई राजनीतिक अधिकारको नाममा राजनीतिक दलकै नेताहरूमार्फत भ्रममा पारेर राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने खेल चलिरहेको छ ।
यसकारण मनाउने पृथ्वी जयन्ती
Thursday, 01.12.2017, 01:37pm
इतिहासले भन्छ– नेपाल विश्वमा कसैको दास नभएको मुलुक हो । एसियामा स्वतन्त्र रहन सफल पहिलो राष्ट्र हो । बेलायती साम्राज्यले दक्षिण एसिया कब्जा गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता जोगाउने वीर महापुरुषको जन्म भैसकेको थियो । त्यस्तै वीरको सम्झना गर्न मुलुकले कञ्जुस्याइ गरिरहेको छ ।
Wednesday, 01.04.2017, 12:01pm
अहिले राष्ट्र जोगाउने कि सत्ता भन्ने ज्वलन्त प्रश्न आम नेपालीको मनमा उब्जिएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न भन्दै राखिएको राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्ताव, नेपाली सेनालाई भारतको मातहत संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति अभियानमा पठाउने प्रस्ताव जस्ता विषयले नेपालमा देशभक्त नेताको खडेरी नै परेको स्पष्ट देखिएको छ ।
पूर्व राजाको एउटा विज्ञप्तिले हल्लाउँदा
Thursday, 12.29.2016, 03:23pm
अघिल्लो हप्ता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एउटा विज्ञप्तिको चिर्कटो मिल्काउँदा राजनीतिक दलका नेता र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सातो गयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पूर्व राजाले बोल्न समेत नपाउने भन्दै धेरै बोल्न थाले दरबार हत्याकाण्डको फेरि अनुसन्धान गर्ने धम्की दिए । दरबार हत्या काण्डको अनुसन्धान थाल्ने भनेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यसको दोषी ठहर गरेर कारबाही गर्ने भनिएको हो ? तर, नेपाली जनताले बुझेको कुरा के हो भने दरबार हत्याकाण्ड वर्षौंको ग्राण्ड डिजाइनको उपज थियो ।
Tuesday, 12.20.2016, 12:06pm
मुलुकको नेतृत्व गर्नेहरुले राष्ट्रिय स्वार्थ र चासोका विषयमा गम्भीर चिन्तन र विश्ल्ेषणा अनि भविष्यका बारेमा सोचेनन् भने मुलुक दुर्भाग्यकाा खाडलमा जाकिन्छ । अहिले नेपाल यस्तै दुर्भाग्यको शिकार भैरहेको छ । नेताहरुको मनमा जे उब्जियो, उनीहरुको मस्तिष्कमा जसले जे घुसाइदियो त्यही राष्ट्रिय एजेण्डा हुने गरेको छ । नेताहरुले भन्न त मुलुक बनाउँछु भन्छन् तर उनीहरु बनाउने नाममा भत्काउन उद्यत भैरहेको अहिलेका गतिविधिले देखाउँछ ।
संघर्ष अखण्डता र विखडनका बीच
Wednesday, 12.07.2016, 02:36pm
अहिले मुलुकको एक भाग आन्दोलित छ । यो आन्दोलन तराई–पहाडको सम्बन्ध टुटाउन खोजेको बिरुद्धमा छ । प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि पश्चिम नेपालको केन्द्र बुटवलमा यसको विपक्षमा मानव सागर उर्लिएको छ ।
किन हिस्रक बन्दैछ मानिस ?
Tuesday, 11.29.2016, 10:58am
सन्तुलित वातावरणमा मात्र जीवको सहज यापन सम्भव छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन । कृतिम अनुकूलताले मानिसलाई दीर्घकालीन रुपमा सन्तुलित राख्न सक्दैन । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्ने तापक्रमले मानिसमा हिंसात्मक प्रवृत्तिको विकास गराउने हुँदा हत्या, बलात्कार जस्ता आपराधिक घटनामा वृद्धि भैरहेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ ।
Wednesday, 11.23.2016, 01:44pm
नेपालकको राजनीतिक–कूटनीतिक अवस्था अहिले निकै जटिल छ । भारतसंग विग्रेको सम्बन्ध सपार्ने नाममा चीनसंग सप्रिरहेको सम्बन्ध विग्रेको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सकिन्छ । नेका–माके गठबन्धनको सरकारले नेपालको समदूरीको कूटनीतिलाई भारततिर ढल्काइदिएको छ र यसैको कारण हो नेपालको राष्ट्रिय विषयहरूको निर्णय समेत दिल्लीबाटै हुने गरेको छ ।
Tuesday, 11.08.2016, 12:45pm
मुलुकको राजनीतिमा सहमति शब्दको प्रयोग व्यापक छ तर यसको कार्यान्वयन भने शून्य । त्यसैले अब यसको अर्थ विपरीत लाग्न थालेको छ । यही सहमतिको रटान र कथनले गर्दा २०७४ माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने तीन तहको निर्वाचन तामेलीमा पर्ने देखिएको छ । त्यति मात्र हैन निर्वाचन अघि संविधानमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
दक्षिण एसियामा मोदीप्रतिको मोहभंग
शपथग्रहण कूटनीति अपनाएर दक्षिण एसियाका देशहरुसंगको सम्बन्ध सुधार्ने बाचा गर्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रतिको मोह भंग भएको छ । भारतकै कारण अगिन्ती समस्या भोगिरहेका दक्षिण एसियाका देशहरुमा मोदीले पहिलेका शासकले सम्बन्ध विगारेको भन्दै जसरी सम्बन्धको हात अघि बढाए त्यतिबेला उनको वाहवाही भएको थियो । तर अहिले तिनै मोदी त्रासको पात्र बन्न पुगेका छन् ।
राजनीतिको नाममा अपराधको खेती
Tuesday, 09.27.2016, 11:59am
नेपालको राजनीतिमा अपराधको जालो छ । राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरू ठूला अपराधमा संलग्नहरूको संरक्षणमा लाग्छन् भन्ने प्रमाण धेरैपटक देखिएको छ । चरी–घैंटे प्रकरणमा नेपालको राजनीतिमा अपराधको जालोको सामान्य नमूना हो । राजनीतिको आडमा अवैध असुली गर्ने कामले पनि तीब्रता पाएको छ ।
किन विकृत पारियो ऐतिहासिक संविधान ?
Tuesday, 09.20.2016, 02:26pm
ऐतिहासिक संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्यनमा अनेक जटिलता छ । र त्योभन्दा बढी जटिलता बाहिरी र भित्री कारणले त्यो उत्पन्न भएको छ । त्यसपछि जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरूले देखाउन नसकेको दृढ इच्छाशक्ति पनि अर्को कारण हो । मुलुकको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाले जारी गरेको संविधान एक वर्षभित्रै दुईपटक संशोधन हुँदैछ ।
सम्बन्ध विग्रिएको भारतकै कारणले
Tuesday, 09.13.2016, 11:10am
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दुई दिनपछि भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणले भारतसंग विग्रिएको सम्बन्ध सुधारिने दावी हुँदैआएको छ । मधेशवादी नेताहरूले त सम्बन्ध सुधार्न के के गर्नुपर्छ भनेर सुझाव नै दिए । तर, नेपाल र भारतको सम्बन्ध कसरी के कारणले विग्रियो भन्ने अहम् प्रश्नको खोजी भने कमैले गरेका छन् । नेपाल र भारतका जनताको सम्बन्ध सुमधुर छ, समस्या शासकवर्गको हो ।
विपत्ति निम्त्याउने मान्छेले नै हो
Tuesday, 09.06.2016, 11:13am
मानिसमा उत्पन्न अहंकार र शक्तिको उन्मादले प्रकृतिमाथि विजयी पाएको दम्भ प्रदर्शन गर्दा मानव समाज अनेक समस्यामा परिरहेको छ । सामुद्रिक आँधी, बाढी, पहिरो लगायतबाट भएको मानव तथा भौतिक क्षतिमा मान्छे नै जिम्मेवार र कारक हो ।
पहिला समस्या चिनौं अनि समाधान
नेपालको अहिलेको समस्या के हो र यो समस्या सिर्जना हुनुको कारण र कारक को–को हुन् भन्ने गम्भीर विश्लेषणको विषय छ । यही कुरा मनन् गर्न नसक्दा नेपालमा जेजति राजनीतिक परिवर्तन भए त्यसको श्रेय अरुले नै लिने र उनीहरूले नै यसको लाभ लिन खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आम नेपाली जनताले थाहा पाएको यो प्रवृत्ति नेताहरूले थाहा नपाउने कुरै भएन तर उनीहरू यस्तै प्रवृत्ति निम्त्याउन निरन्तर प्रयासरत छन् । त्यसैले त विश्वलाई आश्चर्यचकित पार्ने राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि नेपाली जनताको अवस्था भने झन्झन् कमजोर बन्दैगएको छ ।
नेपाली युवाहरुको यथार्थता र युवा दिवस
Tuesday, 08.16.2016, 12:26pm
मुलुकमा अथाह प्राकृतिक स्रोत भएर पनि युवाहरु बेरोजगार बनिरहेका छन् । ती स्रोतको परिचालनभन्दा विदेशीलाई सुम्पेर सत्ता र शक्ति जोगाउने प्र्रपञ्च मात्र चलिरहेको छ । यसले गर्दा एकातिर युवाहरु कामकै लागि विदेशिनुको विकल्प छैन भने अर्कातिर अपराध तथा दुव्र्यशनमा फस्न पुगेका छन् । युवा दिवसको सन्दर्भमा यी विषयहरुतिर ध्यानदिने कोही छैनन् ।
भारतको हातमा रहेका ठूला आयोजनाहरूको काम नै अघि बढ्न सकेको छैन । दुई दशक अघिको महाकाली सन्धि अनि पञ्चेश्वर परियोजनाको काम पनि त्यस्तै छ । साँढे पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनन हुने ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना संचालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको समाचार पटकपटक सार्वजनिक भए पनि ठोस गति लिन सकेको छैन ।
Tuesday, 07.26.2016, 12:08pm
नेपालको राष्टिय स्वाधीनता र अखण्डतामा भारतले बाहिरी र भित्री रुपमा प्रहार गरिरहेको छ । नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतिर लम्कियो कि भारतले यहाँका लेण्डुप मार्कालाई उचालेर अस्थिरता सिर्जना गराइहाल्छ । आफ्ना मान्छे सरकारमा पुगेपछि केही न केही सम्झौता गराउँछ । केही समययता प्रधानमन्त्री स्तरमा भारतले नेपालसंग लिने किसिमले कुनै सम्झौता गरेको छैन ।
Tuesday, 07.19.2016, 10:31am
समाजसेवाको भावनाबाट उत्प्रेरित हुनेहरू नै राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनिए पनि नेपालमा राजनीति पेशा–व्यवसाय बनेको छ । राजनीति देश र जनताका लागि हो अनि प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र)मा राजनीतिक दल र नेताको ठूलो भूमिका हुन्छ । उनीहरूले समाज रुपान्तरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र गर्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ, जनताले सोही आशा गरेका हुन्छन् ।
Thursday, 07.14.2016, 08:21am
भुटान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक भए पनि भारतको सुरक्षा छाता ओढेर बसेको छ । आफ्नो स्वतन्त्रता अन्यत्र बन्धकी राखेका देशका जनता कसरी सुखी ? भौतिक सुविधाले मात्र मानिस सुखी हुँदैन । यस्तोमा दक्षिण एसियाको सानो हिमाली मुलुक भुटान कसरी सुखी छ ? सिक्किम भारतले निलेपछि त्यहाँका प्रबुद्ध वर्गहरु अहिले पनि भन्ने गर्छन्– ‘हामी सम्पन्न छौं तर स्वाभीमान छैन’ ।
» मनलाग्दो गर्न पायौं तर ....
» कहाँबाट छिर्छन् नेपालमा आतंकवादी ?
» अब पनि अब जे गर्छ भारतले गर्छ ?
» असोज तीन गते ‘कु’ हुने थियो ?
» जनताको आँखामा छारो हाल्दै सरकार
» युरोपको आँखामा किन फुलो प¥यो ?
» भारतको शीतयुद्धकालीन आँखा
» नेपाल विश्वमा अग्रणी छ महिला अधिकारमा
» दुई सय वर्षअघिको त्यो सन्धि
» केही त थियो सुशील कोइरालामा
» हामी कुन बाटो रोज्दैछौं ?
» सरकार सरकार जस्तो भएन
» राष्ट्र असफलताको खतरा
» नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ?
» मधेशलाई जलभण्डार बनाउने ग्राण्ड डिजाइन
» स्रोत–साधन छ कार्यतत्परता र व्यवस्थपन छैन
» राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि...
» नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र
» भारतीय नाकाबन्दी : त्यो बेला र यो बेला
» अब उठाऔं ग्रेटर नेपालको मुद्दा